Guddiga Doorashada Puntland oo War-murtiyeed kasoo saaray shir uga socday magaalada Garoowe | SAHAN ONLINE
Guddiga Doorashada Puntland oo War-murtiyeed kasoo saaray shir uga socday magaalada Garoowe
GAROOWE – Guddiga doorashada Puntland ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey qodobo kasoo baxay shirkii wadatashiga nidaamka axsaabta badan ee Puntland kaasoo maalintii Axada 11 June ka furmay Garoowe.
Guddiga doorashada oo warbaahinta kula hadlay Garoowe ayaa sheegay in dood iyo wadatashi ka dib ay guddigu isku raaceen lix qodob oo kamid ah tallooyinkii ay soo jeediyeen Siyaasiyiinta,Aqoonyahankii iyo ururada bulshada iyo gollaha xukuumadda ee ka qeybgalay shirkii PDRC ,waxaana kamid ah qodobadaas.
In la yareeyo khidmadaha diiwaan gelinta ururada iyo Axsaabta siyaasiga ah.
In la yareeyo tirada taageerayaasha ururada ku yeelanaayaan goboladda Puntland ( Tiradii hore 300 qof gobol kasta).
In la sameeyo Maxkamadii dastuuriga ahayd sida ugu dhaqso badan.
In la kordhiyo muddada diiwaan gelinta ee ku ekayd 25 June 2017.
In la socod siiyo hanaanka geedi socodka xisbiyada badan ee Puntland, iyada oo aan lagu xirayn xili doorasheedka 2019ka.
in dowladda Puntland shir u qabato beesha caalamka kuwooda danaynaya barnaamijka doorashooyinka Puntland.
Guddoomiye kuxigeenka Guddiga Doorashada Maxamed Soofe Xasan ayaa sheegay in ay Baarlamaanka u gudbin doonaan qodobada la xiriira lacagta laga qaadayo ururada iyo yaraynta tirada taageerayaasha gobolada taasina ay go’aan ka gaari karaan Baarlamaanka oo keliya.
Kordhinta mudda diiwaangalinta ururada waa shaqo u taal guddiga doorashadda, marka aan dib isugu laabano oo aan ka tashano ayaan soo bandhigi doonaa waqtiga lagu kordhinayo. mudadii hore waxay ku egtahay 25 bishan June 2017” ayuu yiri Guddoomiye Soofe.
Ugu dambeyn ,wuxuu ugu baaqay siyaasiyiinta danaynaya in ay hoggaamiyaan shacabka ay furtaan xisbiyo siyaasadeed ,sidoo kale waxa uu sheegay ineysan isku xirnaan doonin doorashada 2019 ka iyo hannaanka axsaabta badan ee Puntland.